Izindaba - Izici ezintathu zokushayela zokwakha uphawu lukapulasitiki wamatshe
Izici ezintathu zokushayela zokwakha sha zamatshe zepulasitiki zamatshe
Ukuthuthukiswa kwemboni yamatshe epulasitiki yamatshe eChina sekuqale ukuvuthwa kancane kancane, kanti nomgwaqo wokwakhiwa kwesiko lomkhiqizo wezinkampani ezithile ezincane naphakathi nendawo nawo uthuthuka ngejubane elinzima. Ukwakhiwa kokuphathwa komkhiqizo, iziteshi zokumaketha kanye namamodeli, kanye namakhono wezobuchwepheshe ezinkampani ngumnotho wethu wesikhathi esizayo. Isikhali esivumayo ekuthuthukisweni nasekuthuthukisweni. Njengoba sonke sazi, i-PVC flooring ihlukaniswe ngamakhoyili namashidi. Ukwehla kwepulasitiki ngamatshe kubhekiswe ngqo kumashidi. Kusuka esakhiweni, lihlukaniswe kakhulu njengeshidi elilodwa elenziwe ngokufana, ishidi elihlanganisiwe le-multilayer, kanye neshidi eliyisisekelo eli-homogeneous; kusukela kumumo, ihlukaniswe ngezinto eziyisikwele nezinto zokuhlubula. Imishini yaphansi yamatshe epulasitiki isebenzisa iplastiki ye-pvc njengempahla eyinhloko ukuthola umusa wabathengi kancane kancane, lokhu kungaphansi kwamatshe epulasitiki. Iphansi lepulasitiki lamatshe libizwa nangokuthi ngethayela lepulasitiki lamatshe. Igama elisemthethweni kufanele libe yi- "PVC sheet floor". Luhlobo olusha lwezinto zokuhlobisa phansi ezakhiwe ngocwaningo lwekhwalithi ephezulu nobuchwepheshe obuphezulu nentuthuko. Isebenzisa impuphu yemabula yemvelo ukwakha amathayili aphansi kakhulu futhi aminyene. Isendlalelo esiqinile sesakhiwo senethiwekhi ye-fiber, ingaphezulu limbozwe ngogqinsi olungagqoki olugqokekayo oluqinile lwe-polymer PVC, olucutshungulwa ngamakhulu ezinqubo. Lezi zinto ezintathu yizinto ezibalulekile ekuthuthukisweni komphakathi kwezinkampani zaphansi, ikakhulukazi kwinkampani yaphansi eyenza isikhathi sokwakha isithombe somkhiqizo.
Umhlinzeki wezitezi uthe okokuqala, kosomabhizinisi onemibono, imibono nokuqonda, anamathela kukho futhi abe nolwazi oluthe xaxa lomkhiqizo ekwakhiweni komkhiqizo. Lapho sibhekene nemali enganele, ukuntuleka kwamathalente, nemikhiqizo eyodwa, sikulungele ukusebenzisa lelo thuba, sibona ubuhle nobubi benkampani, nokugwema ubuthakathaka.
Ochwepheshe bezokuhlinzeka ngokwakhiwa kwepulasitiki phansi bathe isizukulwane esilandelayo samathalente yiyona nto ehamba phambili ekuthuthukiseni inkampani. Ngaphansi kwesizinda se-homogenization emakethe yaphansi yasekhaya, umehluko phakathi kwemikhiqizo unquma izinzuzo zemikhiqizo emncintiswaneni wemakethe. Uma izinkampani zaphansi zifaka ukuthuthukiswa komkhiqizo wesikhathi eside, kufanele zinake ukuqeqeshwa nokwethulwa kwamathalente.
Okokugcina, iziteshi zokumaketha kanye namamodeli yizona zinto ezinqumayo zokuphathwa kwezinkampani ukukhula ngokushesha nangokunempilo lapho imvelo yaphansi inzima futhi umnotho wezimakethe ucindezelekile. Hlukanisa ukuthuthukiswa kwesu laseChina, futhi wandise imizamo yokuphakanyiswa komkhiqizo, ucwaningo lobuchwepheshe bomkhiqizo namakhono wokuthuthuka, nezindlela zokukhangisa zemikhiqizo ezihlobene.